भुटानले सीमा वार्ता अघि बढाउने सम्झौता गरेपछि नरेन्द मोदी तनावमा ! | Dainik News Nepal
काठमाडौं । चीन र भुटानले सीमा वार्तालाई तीव्रता दिन प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
भारतले चीन र भुटानबीच भएको सम्झौताबारे ‘नोट’ गरेको चिसो प्रतिक्रिया दिएको छ। चीनसँग सो सम्झौता गर्नुअघि भुटानले भारतलाई यसबारे कुनै जानकारी दिएको थियो वा थिएन भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ।
चीन र भुटानबीच अझै दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको छैन। दुवै देशमा एकअर्काका राजदूतावास छैनन्। यो सम्झौतामा पनि भुटान र चीनका नयाँदिल्लीस्थित राजदूतावासले समन्वय गरेको जनाइएको छ।
सीमा विवाद सल्टिएर दुवै देशमा एकअर्काका राजदूतावास खुल्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी निकट अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।
दुई मुलुकबिच भएको यो सीमा वार्तासम्बन्धी सम्झौतालाई चिनियाँ मिडियाले ुऐतिहासिकु भनेर प्रस्तुत गरेका छन् भने भारतीय मिडियामा यो सम्झौतालाई लिएर एक किसिमको संशय देखिन्छ।
चीन र भुटानबीच दोक्लम क्षेत्रबारे विवाद बढेपछि भारतले सन् २०१७ मा आफ्ना सेना त्यहाँ पठाएको थियो। सो बेला भारतीय सेना सीमा अतिक्रमण गरेर १०० मिटर जति आफ्नो भूमिभित्र छिरेको आरोप चीनले लगाएको थियो। धेरै महिनासम्म दोक्लममा चीन र भारतबीच तनाव कायम रह्यो। अन्ततस् भारतीय सेना त्यहाँबाट पछि हटेको थियो। सो बेला भुटानको समहतिमा चिनियाँ अतिक्रमणु रोक्न आफूले सेना पठाएको दावी नयाँदिल्लीले गर्ने गरेको छ।
के हो दोक्लम विवादरु यसमा भारतको संवेदनशीलता किन जोडिएको छ?
भुटानको पश्चिम-उत्तर सीमामा रहेको दोक्लम चीनको नियन्त्रणमा छ। उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि चीनले सन् २०१७, जुनमा निर्माण सामग्री र गाडी पठायो। भुटानले तत्काल त्यसको विरोध गर्‍यो। भुटानी सेनाले चिनियाँ सैनिक र सडक निर्माणका लागि आएका मानिसलाई पछि हट्न भन्यो। चिनियाँ सैनिकले टेरेनन्। त्यसपछि भारतसँगको रक्षा सन्धिमा टेकेर भुटानले भारतीय सहयोग मागेको विश्वास गरिन्छ।
यी सबै कारणले दोक्लम क्षेत्रमा चीनले गर्न लागेको सडक र अन्य संरचना निर्माणले भारत सशंकित थियो। दोक्लमको रणनीतिक महत्वका कारण चीनले यसलाई सामरिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेछ भन्ने भय भारतलाई छ। भारतले चीन(भुटान सीमा विवादमा आफ्ना सैनिकलाई चीनविरूद्ध उतार्नुको मुख्य कारण यही थियो।
अहिले आएर भुटान र चीनबीच सीमा वार्तालाई तीव्रता दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भारत सशंकित छ। अर्कोतिर भुटानमाथि अनावश्यक दवाब हालेर भारतले भुटान(चीन सीमा वार्तालाई विगतमा प्रभावित पार्ने गरेको आरोप ग्लोबल टाइम्सले लगाएको छ।
चीन र भारतबीच स्थानीय सैन्य तहमा लामो समयदेखि जारी वार्ता भने पछिल्लो हप्ता कुनै प्रगति बिना लगभग स्थगित हुने अवस्थामा पुगेको छ। दुवै मुलुकका सेना आउने हिउँदको कठिन मौसममा पनि उच्च हिमाली भेगमा आमने(सामने हुनेछन्।
ुसाउथ चाइना सीु मा चीनको धेरै मुलुकसँग सीमा विवाद छ। यो विवादमा ‘क्वाड’ गठबन्धनले अरू मुलुकलाई साथ मात्र दिएको छैन, चीनविरूद्ध उभिने अघोषित नीति नै बनाएको छ।